Zavers: Dhijitari Coupon Kugovaniswa kubva kuGoogle | Martech Zone
Zavers: Dhijitari Coupon Kugovaniswa kubva kuGoogle
China, Kukadzi 20, 2014 China, Kukadzi 20, 2014 Douglas Karr
Google iri kuwedzera kusvika kwayo mukuparadzira coupon yedhijitari ne Zavers. Zavers inogonesa vatengesi kuti vawane iwo akakodzera makoni kune vatengi chaivo, kuwedzera zvirongwa zvemubairo, uye kuteedzera kudzikunura mune chaiyo-nguva. Vatengi vanowana zvigadzirwa zvemugadziri pane avo avanofarira vatengesi mawebhusaiti uye vanowedzera makadhi edhijitari kumakadhi avo epamhepo. Mari inochengetwa inobviswa pakarepo kana vatengi vachinge vopeta kadhi ravo remubairo kana kunyora manhamba avo efoni - hapana kuongorora kana kurongedza kwemakoponi epanyama anodiwa.
Bhenefiti yeZavers Dhijitari Coupon Distribution
mibayiro - Zavers neGoogle inokutendera iwe kuti uwedzere zviripo zvinokurudzira zvirongwa uye mubairo wekutenga nemadhijitoni coupon. Iwe unogona zvakare kupa yekugadzira zvidzikisira kune vatengi pasina kuda kugadzira chirongwa chekurudzira.
Wedzera kuchinjisa kumhanya pane rejista - makuponi anoshandiswa pakutenga zvisina musono pasina chikonzero chekuratidza nekutarisa pepa kana coupon yedhijitari. Ruregerero runoitika munguva chaiyo, ichideredza kukakavara uye nguva yekutarisa. Vatengi vanoshandisa Google Wallet vanogona zvakare kudzikunura avo coupon nekukanya foni yavo pakubuda.
Ita kuti zvive nyore kuponi yekugadzirisa - Zavers neGoogle inoita kuti kugadzirisa kuve nyore, nekukurumidza uye kunodzivirira kubiridzira.
Wedzera saizi yebhasikiti - Wana mukana weGoogle yakazara network yemakomponi ekugadzira kuti ikubatsire iwe kuwedzera saizi yebhasikiti uye tsoka dzetsoka kuenda kumatirisheni matsva.
Target kugovera - mutengi segmentation kugona inokutendera iwe kuendesa akakodzera makoni kune akakodzera vatengi. Wedzera kusvika kwemakoni akatsvagwa pawebhu neGoogle's ad network uye iyo Google Display Network.
Zavers 'pay-per-redhiyo modhi inovimbisa kuti hapana mari yekugovera, kuoneka, kana kusevha - chete kubhadhara kana mutengi adzikunura coupon yechigadzirwa chakasimudzirwa. Google Display Network ndiyo hombe kushambadzira network yerudzi rwayo, inosvika vanhu vanopfuura vapfumbamwe pagumi muUS
Tags: kopanicoupon adskugovera kopanicoupon redemptiondigital makuponiGoogle +mafoni couponszavers
Iyo Email uye Yemagariro Media Jugalbandi
Serchen: Yako Cloud App Ratings uye Ongororo Saiti